Guddoomiye Jawaari oo shir uga qeybgalay Isagoo ah Kusimaha Madaxweynaha Soomaaliya[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Guddoomiye Jawaari oo shir uga qeybgalay Isagoo ah Kusimaha Madaxweynaha Soomaaliya[Sawirro]
MUQDISHO – Shir ayaa maanta ka dhacay xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho kaasoo ay isugu yimaadeen deeq-bixiyaasha iyo daneeyaasha Arrimaha Soomaaliya iyo Dowladda Federaalka.
Shirkan ayaa looga hadlay arrimaha bini’aadanimada iyo wax ka qabashada xaaladda abaarta ee dalka ,waxaana shir guddoominayey Prof. Jawaari.
Shirkan waxaa ka soo qaybgalay Afhayeenka Baarlamaanka Soomaaliya iyo kuxigeenka kowaad Cabdiweli Muudey, ergayga Qaramada Midoobey ee Soomaaliya iyo qaar kamid ah wakiilada caalamka u fadhiya Soomaaliya.
Hay’adaha gar-gaarka bini’aadanimada ayaa sheegay in xaaladda abaartu ay tahay mid aad u daran oo ay qarka u saaran yihiin malaayiin Soomaaliya, waxaana ay ka digeen in ay dhacdo xaalad la mid ah tii sanadkii 2011.
Dhanka kale ayaa shirkan looga hadley arrimaha caafiaadka iyo waxbarashada.
Todobaadkii hore ayaa Maxamed Cismaan Jawaari sheegay in Soomaaliya leedahay Baarlamaan iyo shir guddoonkiisi sidaas darteed waxa loogu yeeri jirey Hoggaanka Madasha Qaranku ay tahay mid aan sharci haysan.
In Jawaari shir guddoomiyo isaga oo ah ku-simaha Madaxweynaha ayaa xaqijineysa in Xasan Sheekh Maxamuud uu kamid noqdey musharixiinta isla markaana aanu wax awood ah u lahayn dalka.
Arrintan ayaa imaaneysa iyada oo sarkaal u hadley ciidanka qalabka sida maalintii Axadda uu sheegay in ay ka amar qaadanayaan Jawaari.